Splunk လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး - အင်တာဗျူးမေးခွန်းများနှင့်အဖြေများ - ၎င်း၏ Tech မှကျောင်း
27 မာ 2017
Splunk သင်တန်း Splunk software ကိုအသုံးချဖို့စက်ဖန်တီး data တွေကိုခွဲစိတ်ဖို့မျှော်လင့်ထားသည့်ကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည်အားဖြင့်သင်တို့ကိုပြင်ဆင်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ Splunk Analytics မှသင်အချက်အလက်များ၏ကြီးမား volumes ကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာမှုတစ်ခုအခွင့်အလမ်းကိုငါပေးမည်။ ဤသည် Splunk လက်မှတ်သင်တန်းအစီရင်ခံစာများကိုထုတ်လုပ်တံဆိပ်များနှင့်ဖြစ်ရပ်အမျိုးအစားများကိုအောင်ရလဒ်များမရှိမဖြစ်စုံစမ်းရေးကော်မရှင်, ခွဲဝေမှုနဲ့အပိုသင်တန်းထည့်သွင်းခြင်း, ဇယားဖန်ဆင်းခြင်း။ ဒါဟာစာမေးပွဲ, နှိုးစက်, စုံစမ်းရေးကော်မရှင်နှင့် dashboards log နှငျ့သငျထိရောက်သော Splunk ဆော့ဖ်ဝဲရေးလုပ်, သင် splunk အင်ဂျင်နီယာ, Splunk syslog, syslog server ကို ACE ကူညီပေးပါမည်။
Splunk ကွပ်မျက်သင့်လုပ်ငန်းကိုပြောင်းလဲနှင့်အောက်ပါအချက်များကိုအဆင့်အထိယူပါလိမ့်မယ်။ က may ကဲ့သို့ဖြစ်ရ, မေးခွန်းဖြစ်ပါသည်: သင်တစ်ဦး Splunker ဖြစ်ဖို့ကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည်နှင့်စွမ်းရည်တွန်းအားပေးသလား? ဟုတ်ကဲ့, ထို့နောက်အတိုက်အခံထူးခြားသောဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို၏အလငျး၌အများဆုံးကွောအလားအလာန်ထမ်းတွေ့ကြံ-Up သည်ကိုယ်သတ်မှတ်ထားသောချွတ်အခွင့်အလမ်းပေါ်မှာ။ သငျသညျဤ blog တွင်ပြောကြားခဲ့သည်ထားတဲ့အရှိဆုံးကျယ်ပြန့်အသိအမှတ်ပြု Splunk အင်တာဗျူးမေးခွန်းများကိုကြုံနေရခြင်းဖြင့်စတင်နိုင်ပါတယ်။
10 အင်တာဗျူးမေးခွန်းများနှင့် Splunk လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးများအတွက်အဖြေများ
Splunk ကဘာလဲ? အဘယ်ကြောင့် Splunk စက်ဒေတာချက်ကိုပိုင်းခြားစိတ်ဖြာဘို့အသုံးပြုသွားမည်သလဲ?
splunk / splunk အင်ဂျင်နီယာများ၏အစိတ်အပိုင်းများဘာတွေလဲ?
Splunk DB connect ကဘာလဲ?
Splunk ရှုထောင့်ကနေ '' လိုင်စင်ကိုချိုးဖောက် '' ရှင်းလင်း။
စာရင်းဇယားနှင့် eventstats ပညတ်တော်တို့ကိုအကြားကွဲပြားခြားနားဘာလဲ?
Splunk အင်တုံဘာတွေလဲ? အဆိုပါလုပ်နိုင်တဲ့ဘဝမှတ်တိုင်သံသရာစက်ဝိုင်းရှင်းလင်း။
အချက်ပေး Manager ၏စွမ်းရည်ရှင်းလင်း?
Splunk သင့်ရဲ့စက်ကိုဒေတာအတွက် Google ကဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာမျိုးပိုင်ဆိုင်ရရှိဖို့ရှာဖွေနေ, ကြေညာ, သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒေတာစောင့်ကြည့်ဘို့အသုံးပြုသွားမည်ဆော့ဖ်ဝဲ / မော်တာပါပဲ။ Splunk အမြတ်အစွန်းစက်ဒေတာကြာနှင့်ဇယား, သတိထား, အစီရင်ခံစာများနှင့်ဒါပေါ်မှတဆင့်သင့်ရဲ့ဒေတာမှအစစ်အမှန်အချိန်နားလည်မှုပေးခြင်းအားဖြင့်နိုင်စွမ်းလုပ်ငန်းလည်ပတ်အသိပညာသို့ပြောင်းလဲ။
Splunk ဒါထွက်လျှောက်လွှာအုပ်ချုပ်ရေး, အိုင်တီလုပ်ငန်းများ, လုံခြုံရေး, တသမတ်တည်း, မှားယွင်းစွာတင်ပြဖော်ထုတ်ခြင်း, အန္တရာယ် perceivability နှင့်သို့အတွေ့အကြုံများပေးနိုင်ပါသည်ကတည်းကစက်ဒေတာဖြိုဘို့အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဦးခေါင်းကွညျ့လိုကျ - ရှာကြံဖို့ GUI ကိုပေးသည်
Indexer - ဖိုင်တွေစက်အချက်အလက်များနှင့်ဒေတာများ။
Forward - ညွှန်းကိန်းကို Forward မှတ်တမ်းများ
ဖြန့်ကျက် server ကို - ဖြန့်ချိအခြေအနေ splunk segments များစီမံခန့်ခွဲ။
Splunk အတွက်လိုင်စင် Ace အချက်အလက်များ၏စံပြအတိုင်းအတာတင်သွင်းရရှိကြောင်းအာမခံတာဝန်ခံဖြစ်ပါတယ်။ Splunk လိုင်စင်တစ်ခု 24hr ပြတင်းပေါက်အတွင်းပိုင်းနှင့်ဤလိုင်းများတလျှောက်တွင်စင်မြင့်သွားသောဒေတာများအသံအတိုးအကျယ်အပေါ်မူတည်, မြေကြီးသားရရှိသော volume ၏ကန့်သတ်အတွင်းမှဖြစ်နေဆဲကြောင်းအာမခံပါသည်။
ဒါဟာမစိုက် Splunk မေးမြန်းချက်များနှင့်အစီရင်ခံစာများနှင့်အတူဒေတာဘေ့စ data တွေကိုထည့်သွင်းရန်သင်ကခွင့်ပြုတဲ့ယေဘုယျ SQL database ကို module တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ Splunk လုပ်ငန်းနှင့်ဆက်စပ် databases ကိုအကြား, အားကိုးချက်နဲ့နှင့် Real-time ပေါင်းစည်းမှုကိုပေးတော်မူ၏။
သင် data တွေကိုကန့်သတ် outperform သောဖြစ်ရပ်အတွက်, ထို့နောက်သင်တစ်ဦး '' လိုင်စင်ကိုချိုးဖောက် '' အမှားသရုပ်ပြလိမ့်မည်။ ပစ်ကြောင်းယင်းလိုင်စင်ကိုသတိပြုရန်, 14 နေ့ရက်ကာလအဘို့သည်းခံရ၏ပါလိမ့်မယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုသို့မဟုတ်လုပ်ငန်းလိုင်စင်အတွက်သင်သည်သင်၏ Indexer ရဲ့စာရင်းပစ္စည်းများနှင့်အစီရင်ခံစာများ activating ဖြတ်ထားတဲ့ရှေ့တော်၌5နေ့ကရွေ့လျားပြတင်းပေါက်အတွင်းပိုင်း 30 သတိပေးချက်များရှိနိုင်ပါသည်။ အခမဲ့ form မှာ, ကသတိပြုဖို့လို့3Tally ညွှန်ပြပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါအကျဉ်းချုပ်စာရင်းကို default အကြမ်းဖျင်းဖိုင် (လုပ်ငန်းသင်သည်အခြားမပြဘူးသောချွတ်အခွင့်အလမ်းအပေါ်အသုံးချ plunk သောဖိုင်) ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျအနှစ်ချုပ်စာရင်းအများအပြားအမျိုးအစားများကို run ဖို့ရှေးခယျြသောချွတ်အခွင့်အလမ်းတွင်သင်သည်အပို rundown ဖိုင်တွေလုပ်ဖို့လိုပမေကတင်ပြထားပါတယ်။
Stats ကတော့သင့်ရဲ့တင်သွင်း rundown အတွက်တစ်ဦးချင်းစီသည်လက်ရှိလယ် rundown ထိုးထွင်းသိမြင်စေနှင့်အသစ်နယ်ပယ်များတွင်အရည်အသွေးတွေအဖြစ်သူတို့ကိုနှမြောခေါ်သော။ Eventstats အဆိုပါစာရင်းဇယားဖယ်ကြောင်းစုဆောင်းမှုရလဒ်များကိုတစ်ဦးချင်းစီဖြစ်ရပ်မှအင်လိုင်းကဆက်ပြောသည်နေကြသည်နှင့်စုစုပေါင်းကြောင်းဖြစ်ရပ်နှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ပါတယ်ရုံလျှင်ကနေအားသွင်းကဲ့သို့ဖြစ်၏။ Eventstats သည့်စာရင်းဇယားများကဲ့သို့တိုင်းတာဘို့တောင်းလျှောက်က register လုပ်သွားသို့သော်ပထမဦးဆုံးရေနံစိမ်းဒေတာမှသူတို့ကိုစုစုပေါငျး။
မှတ်တမ်းတင်ဒေတာများတစ်ဦးက catalog တခု Splunk ကွန်တိန်နာအဖြစ်လူသိများသည်။ ဒါဟာဒါ့အပြင်တိကျတဲ့အချိန်ကာလ၏ဖြစ်ရပ်များပါရှိသည်။ လက်ဆွဲပုံးဘဝမှတ်တိုင်သံသရာစက်ဝိုင်းအဆင့်ဆင့်ပြီးနောက်ယူပြီးထည့်သွင်း:
hot - ဒါဟာနှောင်းပိုင်းတွင်ဖော်ပြထားသောအချက်အလက်များ၏အဖြစ်ပါဝင်သည်နှင့်ရေးသားခြင်းအတွက်ပွင့်လင်းသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုစာရင်းများအတွက်လက်လှမ်းအနည်းဆုံးပူအင်တုံရှိပါတယ်
ပူနွေးတဲ့ - ပူနွေးတဲ့အဆင့်တွင်ဒေတာပူကနေပြောင်းရွှေ့
အေး - နွေးကနေပြောင်းရွှေ့အေးဇာတ်စင်ဒေတာ
အေးခဲ - ဒေတာကိုအေးစိမ့်သောအနေဖြင့်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ client များထိုနည်းတူကတငျသှငျးနိုငျသို့သော်အညွှန်း Eraser သင်တန်းကိစ္စအဖြစ် data တွေကိုခဲ။
Thawed - ပြန်ကြားရေးဖိုင်တစ်ဖိုင်စံချိန်ကနေပြန်လည်ထူထောင်ခဲ့သည်။ သငျသညျခဲ data တွေကိုမှတ်တမ်းတင်သောချွတ်အခွင့်အလမ်းတွင်, သငျသညျနောက်မှ (defrosting) ကမှတ်တမ်းတင်ဖို့ကပြန်လာနိုင်ပါတယ်။
အဆင်သင့်ကြီးကြပ်ရေးမှူးနှောင်းပိုင်းတွင်အဆင်သင့်ကွိဥပမာ, သတိထားသွားကြကုန်အံ့အဖြစ်အများဆုံး၏ rundown ပြသထားတယ်။ ထိုသို့ activated သတိပြုဖို့လိုထံမှအညွှန်းစာရင်းကြည့်ဖို့ချိတ်ဆက်ပေးသည်။ ဒါဟာထိုနည်းတူရဲ့အဆင်သင့်အမည်, လျှောက်လွှာ, မျိုး (ကြိုတင်ဘွတ်ကင်, Real-time, ဒါမှမဟုတ် window ကိုရွေ့လျား), အလေးနှင့် mode ကိုပြသသည်။
ကိုရှာခေါင်းကိုကောက်ခံမှုကြည့်ခေါင်းကိုအာဆီယံ splunk စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအပိုင်းအစတစ်ခုဖြစ်ပါသည်စဉ်ဝန်, Configuration နှင့်ဖောက်သည် data တွေကိုဝေမျှဖို့အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းချိတ်ဆက်ဆာဗာများကိုတစ်ဦးစုရုံးရှာအံ့သောငှါဖြစ်ပါသည်ရှာကြံများအတွက် focal ပိုင်ဆိုင်မှုအဖြစ်ဖြည့်စွက်သွားပါမည်။ အဆိုပါစုံစမ်းရေးခေါင်းကိုအုပ်စုတစ်စုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း Compatibility ကိုမရင်းကတည်းကအလားတူ dashboards နှင့်ရေးရာကို run နှင့်စည်းကနေမဆိုတစ်ဦးချင်းစီအနေဖြင့်သိမြင်လျှင်နိုင်ပါသည်။
သငျသညျအင်တာဗျူးအတွက်ရင်ဆိုင်ရနိုင်ပါတယ် 50 အများစုမှာအဖြစ်များသည့်အင်တာဗျူးမေးခွန်းများ